पर्यटनमन्त्रीको उद्घोष : पर्यटन व्यवसायीको घरभाडा र तलवका लागि छिट्टै केहि निर्णय गर्छौ
सुरज डिजी खनाल आइतबार, जेठ २३, २०७८
कोरोना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय लामो समयदेखी अस्तव्यस्त छ। निरन्तरको लकडाउनका कारण पर्यटन व्यवसायीहरु धरासायी अवस्थामा पुगेका छन्। यहि परिवेशमा सरकारले सरकार पुर्नगठन गर्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरियाले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। नवनियुक्त मन्त्री अरगरियाँसँग नेपाली पब्लिकका कार्यकारी सम्पादक सुरज डिजी खनालले संस्कृती, पर्यटन, नागरिक उड्ययन, जसपाभित्रको बिवादलगायतका बिषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्।
मन्त्रीज्यु, बधाई छ यहाँलाई ।
निकै मुश्किल अवस्थामा मुश्किल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, के छन् योजनाहरु ?
मुश्किल अवस्थामा नै हामीजस्ता युवाहरुले काम गर्न सोच्छौ। तर अब अहिलेको योजनाहरु हेर्नुहुन्छ भने, अहिले कोभिडका कारणले गर्दा मन्त्रालय भित्रैका विभिन्न सेक्टरहरु धरासायी भइरहेको अवस्था छ। जबसम्म हामी पर्यठनमा ध्यान दिदैनौ तबसम्म देशलाई बिकसित रुपमा अगाडी बढाउन सकिदैन्।
त्यसको लागि हामीले आउने दिनहरुमा पन्ध्र दिनको, सात दिनको प्याकेजहरु पर्यटन क्षेत्रमा व्यवस्था गर्छौ। उडानको बिषयमा कुरा गर्दा, कोरोनाकालमा पनि नियमित उडान कसरी हुन्छ? यहि मापदण्डको आधारमा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने योजना ल्याउछौ। मुख्य त हाम्रो संस्कृती जोगाउने हो। जताततै संस्कृतीका धरोहरहरु समाप्त भईरहेको छ त्यसलाई जोगाउँदै अघि बढ्छौ हामी।
तपाईले आफ्नो कार्यकालमा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सांस्कृतिक धरोहर सँगसगै विभिन्न संस्कृतीको जगेर्नाका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ?
सबभन्दा पहिला त विभिन्न भाषा, विभिन्न भेषको मुलुक हो हाम्रो। यो भाषा र भेषहरुलाई संरक्षण गरेर अघि बढ्नुपर्दछ। अर्को कुरा हाम्रो जुन संस्कृती छ त्यो नभुलिकन, एउटा पश्चिमी सभ्यतातिर उन्मुख भएको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा आफ्नो संस्कृतीलाई जोगाएर अघि बढ्यौ भने यो हाम्रो सम्पती हुन जान्छ। यहि हेर्नको लागि पर्यटकहरु पनि आउँछन्।
तपाई मधेशमा जानुभयो भने धोती कुर्ता देख्नुहुन्छ, दौरा सुरुवाल, लेहेङ्गा चोली देख्नुहुन्छ, विभिन्न भेषभुषा छ। थारुहरुको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको आफ्नै संस्कृती छ। सबलाई सम्वर्धन गर्दै अगाडी बढ्नुपर्दछ र यो यदि भयो भने मलाई लाग्छ की हामी ​सांस्कृतिक रुपमा जोगिएर अगाडी बढ्छौ।
तपाईहरु सरकारमा सामेल भइरहँदा बिरोधका आवाजहरु पनि सुनिदैँछन् नि
बिरोधका आवाज छैन। यो मैले गरे ठिक तिमीले गरे बेठिक भन्ने मानसिकता हो। ‘म नाँचे भने कला, तिमी नाच्यौ भने त्यो पेशा’ यस्तो अवस्था छ। तर, जनसमुदायले भने बुझेको अवस्था छ। मधेशका माग–मुद्दाहरु छ त्यो सम्बोधन भएको छ , प्रधानमन्त्रीज्युबाट। यो अवस्थामा मलाई लाग्दैन कि मधेशसमा बिरोध छ। मैले नै शपथ ग्रहण गरेपछी जनकपुरमा साथीहरुले दिवाली मनाएका छन्। त्यतातिर पनि हेर्नुपर्दछ। प्रत्येक समाजमा सकरात्मक र नकरात्मक मान्छे हुन्छ। हामीले सकरतात्मक भएर अगाडी बढ्नुपर्दछ।
अर्को कुरा के छ भने यो भन्दा पहिला पनि हामी सरकारमा गएका थियौ। हाम्रा नेता उपेन्द्र यादव पनि जानुभएको थियो। उहाँको कार्यकालमा मधेशमा के–के मुद्दा सम्बोधन भयो त? तर अहिले हामी सरकारमा नगइकनै के–के गराएका छौँ। त्यतातिर पनि जनसमुदायहरुको ध्यान छ र उहाँहरु बुझ्नुहुन्छ।
यो भनिरहँदा पार्टीभित्रको बिवाद झन्–झन् चुलिदैँ गइरहेको छ, अब जसपाको भविष्य के हुन्छ?
म व्यक्तिगत रुपमा पार्टी जोड्नेतिर हुन्छु जहिले पनि र त्यहि लाइनमा मेरो काम हुन्छ। तर पार्टीभित्र एउटा अहम्ता, जहाँनिर सामुहिकता समाप्त हुन्छ त्यहानिर हैकम हुन्छ, घमण्ड हुन्छ मान्छेमा र त्यो फुट्ने दिशातिर लाग्छ। तर, त्यो गर्नु हुँदैन। म आग्रह गर्छु सबलाई समेटेर अगाडी बढ्नु नै बेश हुन्छ र मधेशको माग पनि त्यहि छ। मधेशी जनसमुदाय चाहेका पनि त्यहि छन्।
जसपाको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकार संकटमा देखिन्छ, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काँग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ नि ?
उपेन्द्र जीको व्यक्तिगतको रुपले भन्नुहुन्छ भने त्यो सांगठनिक रुपले होईन। यसले गर्दा मलाई लाग्छ मधेशमा उहाँहरु ठुलो संकटमा पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन की मधेशको भावनाविपरित कुरामा उपेन्द्र जी अगाडी बढ्नुहुन्छ। तर, बढ्नुहुन्छ भने दुर्भाग्य हुन जान्छ, मधेशी समुदायको लागि र यो पार्टीको लागि पनि।
सरकारको आयु खासै लामो देखिदैन्, छोटो समयमा पर्यटन, संस्कृतीको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
अब जती सोच्नुपर्ने छ त्यसको लागि समय पनि चाहिन्छ र खासगरी अहिले सांसद विगठनको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यो सांसदभित्र एकअर्कालाई गाली गर्ने, एउटा बिधेयक पास नगर्ने अनि त्यहि सिलसिलातिर हेर्नुहुन्छ भने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारबाट संसद विगठन गरिएको छ। पुर्नबहाली भइसकेपछी पनि कुनै बिधेयक संसदमा प्रस्तुत भएन।
खाली पुर्वसांसद सो को प्रस्ताव की गालिगलौज, एक अर्कामाथी आरोपप्रत्यारोप। यो भन्दा बाहेक संसदको केहि काम भएन। त्यसले गर्दा संसदको गरिमा घट्छ र प्रधानमन्त्रीले संसद विघठन गर्नुभएको संसदको गरिमा बढाउनका लागि होला घटाउनका लागि होईन।
पर्यटन व्यवसायीहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
पर्यटन व्यवसायले देशको बिकाश पनि हुन्छ र व्यवसायीहरुको पनि हित हुन्छ। उहाँहरुको सहयोगको लागि सरकारको तर्फबाट हुने सहयोग दिएर अघि बढाउनेछु। र, पर्यटन क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम पनि भएको छ। जब पर्यटकहरुको चाप हुन्छ त्यतिबेलामा विभिन्न समस्या देखिन्छ। ​यहाँ आएका पर्यटकहरु फर्केर जाँदा देशको बारेमा सकरात्मक सन्देश दिउन भन्नका लागि पर्यटन व्यवसायी सचेत हुनुपर्छ र सरकारले पनि कडाई गर्नेछ।
पर्यटन व्यवसायीहरुको भविष्यको लागि सरकार साथमा हुनेछ। ​र कोभिडको बेलामा उहाँहरुलाई घरभाडा, कर्मचारीहरुको तलवले मार पार्छ। हामी छिट्टै त्यो विषयमा बौद्धिक सर्कलबाट, मन्त्रालयमा रहेका र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुको सल्लाह लिएर अगाडी बढ्छौ। सरकारले सहयोग गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ १०:०२